आकाशसँगको भेटमा रोइन् पूजा, एक घण्टासम्म हेराहेर गरे तर भएन बोलचाल ! - Samachar Post Dainik
आकाशसँगको भेटमा रोइन् पूजा, एक घण्टासम्म हेराहेर गरे तर भएन बोलचाल !
नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठ आफू अभिनित ‘धर्ती आकाश’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो रिलिज कार्यक्रममा पुगे ।
कार्यक्रममा पूजा र आकाशको सम्बन्धमा फाटो आएको पनि स्पष्ट देखियो । हरेक कार्यक्रममा एकसाथ आउने, एकसाथ बस्ने र एकसाथ निस्कने यो जोडी कार्यक्रममा भने बोलचाल समेत गर्न अप्ठ्यारो मानिरहेको थियो ।
गत महीनासम्म गहिरो प्रेममा रहेको भनिएको यो जोडी अहिले अलग भएजस्तो देखिएको छ । यो अनुमान किनपनि सहि छ भने उक्त कार्यक्रममा सँगै भएरपनि पूजा र आकाश दुबैजना बोलेनन् ।
चलचित्र ‘रामकहानी’मा पूजाको रोजाइमा नायक बनेका थिए आकाश । यसपछि पूजा र आकाशको सम्बन्ध बलियो बन्यो । पूजा र आकाशको जोडीले ‘सम्हालिन्छ कहिले मन, पोई पर्यो काले, संझना विर्सना’ लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरेको छ ।
यो अवधीमा पूजा र आकाशको सम्बन्ध यति बलियो बन्यो कि, उनीहरु एक अर्कासँग कहिले पनि अलग नहुने वाचा गर्न पछि परेनन् । बजारमा यी दुइको प्रेम चर्चाको खबर फैलियो । यी दुइले प्रेम भन्दा माथि आफूहरुको सम्बन्ध रहेको बताउँदै आएका थिए ।
यो जोडीविच व्यक्तिगत र व्यवसायिक सम्बन्ध दुबै किनारामा पुगेको छ । पूजाले आकाशसँग अफर आएका केही म्यूजिक भिडियो समेत छाडेको वुझिएको छ ।
उसो त, पूजा र आकाशको सम्बन्धमा फाटो यस अगाडि पनि नआएको होइन । तर, पहिले–पहिले एक महिना बोलचाल नगरेर पनि उनीहरु मिल्थे । तर, यसपटक भने यस्तो भएन ।
उनीहरुको बलियो सम्बन्ध चुडिएको छ ।
शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा पूजाले भनिन्–‘जबसम्म पूजा शर्माको श्वास रहन्छ । तबसम्म आकाशसँगको सम्बन्ध बाँचिरहन्छ ।’ पूजाको यो अभिव्यक्तिले उनीहरुविचको मित्रता नटुट्ने बुझ्न सकिन्छ । ‘धर्ती आकाश’को भिडियो हेर्दै गर्दा पूजा शर्मा लामो समयसम्म रोइन् ।
आकाशले पनि आफू पुरुष भएर मात्र आँशु देखाउन नसकेको बताउँदै भन्नका लागि मनमा धेरै कुरा रहेको बताए ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दर्शकले अत्याधिक माया गरेको एक जोडीको सम्बन्धमा फाटो आएको छ । तर, यसपटक भने उनीहरुको सम्बन्ध नजोडिने गरी चुडिएको वुझाई धेरैको छ ।
उनीहरुबीच ब्रेकअप भएको यो भन्दा बलियो प्रमाण हुन सक्दैन । किनभने, परिस्थिती बताउन दृश्य नै काफी छ । पूजा पछिल्लो सिट र आकाश अघिल्लो सिटमा बसेका थिए ।
यतिसम्मकी एकापसमा मुखामुख पनि गरेनन् ।
रजतपटका प्रकाश सुवेदीले संचालन गरेको एक राहत बाँड्ने कार्यक्रममा आकाश गएपछि पूजासँगको सम्बन्ध बिग्रिएको हो । सुवेदीसँग पूजा यसअघि नै क्रुद्ध छिन् । सुवेदीकै कारण आकाश र पूजाको सम्बन्धमा दरार देखिएको हो ।
प्रकाशित मिति ६ श्रावण २०७८, बुधबार ०८:५२